I-Cottage elunxwemeni - I-Airbnb
I-cottage ilungile elunxwemeni. Iqulathe ngokwayo indawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elincinci. Iibhedi ezingamawele, kumgangatho we-mezzanine, zinokudityaniswa ukwenza ibhedi elingana nokumkani.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela elunxwemeni nakwindawo yegadi. Indawo yokupaka ikwisiza. Nangona ungekho umatshini wokuhlamba impahla, ndiyakwazi ukuhlamba iimpahla zeendwendwe ezikwindlu yam esecaleni.
Ndihlala emnyango kwaye ndiya kusebenzisana neendwendwe kangangoko okanye kancinci njengoko benqwenela. Ndidla ngokuba sekhaya, kodwa ukuba ndiseluhambeni ndiza kwenza amalungiselelo okuba ummelwane aqhagamshelane neendwendwe zam.
Isiqithi saseConey siphakathi kweArdglass kunye neKillough. Kukho iivenkile kunye neeresityu kuzo zombini. Kuphantsi kweyure ukusuka eBelfast kwaye iphambi kweeNtaba zeMorne kunye neNewcastle. I-Ardglass inebala legalufa kwaye kukho amathuba amaninzi ekuhlaleni okuhamba, ukuloba kunye nemidlalo yasemanzini.
Izithuthi zikawonke-wonke zinqongophele, kodwa zinokwenzeka. Kukho ibhasi esuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDublin enoqhagamshelo kwiDownpatrick. Kukho ibhasi evela kuzo zombini izikhululo zeenqwelomoya eBelfast enoqhagamshelo kwiDownpatrick, malunga neekhilomitha ezintandathu ukusuka eConey Island. Ukuba ndisekhaya ndiza kuthatha iindwendwe ezivela eDownpatrick. Imali yeteksi imalunga ne-£10.
Ndibonelela ngokutya okusisiseko kusuku lwakho lokuqala ... iti, ikofu, ubisi, iswekile, isonka, ibhotolo, ukutya kwasekuseni, ijam, ityuwa, ipepile, ioli, iviniga.
Zikhona izinto zangasese ezisisiseko.
Umgangatho ongaphezulu uyafikeleleka kubantu abadala abanamandla kunye nabantwana, kodwa uya kuba neengxaki kuye nabani na onengxaki yokuhamba. (Jonga uMfanekiso)
Nangona kukho i-wifi inokuba ngamaxesha athile. Ihlala inokwenzeka ukuyichola ngaphandle kodwa ngamanye amaxesha ayilunganga kangako ngaphakathi kwendlwana.
Ubuncinci ubusuku obuhlala ngoJuni, Julayi, Agasti noSeptemba
4.96 · Izimvo eziyi-479
Retired art teacher and active potter. I travel a lot. I'm looking forward to meeting new people through Airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ardglass